Boyle iwu mgbako-enye
Boyle iwu mgbako
Boyle iwu mgbako-enye gị ohere gbakọọ mbụ ma ndị ikpeazụ olu na mgbali nke gas si Boyle iwu.
Gịnị oke gbakọọ si Boyle iwu
Final olu (Vf) Final mgbali (Pf) Mbụ olu (Vi) Mbụ mgbali (Pi)
Mbụ mgbali (Pi):
Ikuku Onwa kilopascals millimeters nke HG mm. mmiri kọlụm sentimita asatọ HG Sentimita asatọ nke wt. kọlụm Pound kwa sq. Ukwu- Pound kwa sq. Anụ ọhịa
Mbụ olu (Vi):
lita cube cm. cube m. cube inch cubic ụkwụ
Final mgbali (Pf):
Final olu (Vf):
lita cube cm. cube m. cubic sentimita asatọ cubic ụkwụ Atmospheres Pascals kilopascals millimeters nke HG mm. mmiri kọlụm Sentimita asatọ nke HG Sentimita asatọ nke wt. kọlụm Pound kwa sq. Ukwu- Pound kwa sq. Inch
Gbakọọ mpịakọta ya nke ikpeazụ
Boyle iwu na-ekwu na olu nke a nyere uka nke ihe ezigbo gas na a mgbe nile okpomọkụ bụ inversely proportional ka mgbali nke gas: Pi*Vi = Pf*Vf, ebe Pi - mbụ mgbali, Vi - mbụ olu, Pf - ikpeazụ mgbali, Vf - mpịakọta ya nke ikpeazụ.
Jikọtara gas iwu usoro ihe mgbako
Gbakọọ mbụ ma ndị ikpeazụ olu, nsogbu na okpomọkụ nke gas si jikọtara gas iwu akụkụ.
Molarity ịta usoro ihe mgbako
Gbakọọ ezengwenri ịta, uka nke compound, olu na usoro arọ nke a chemical ngwọta.
Mmesho unit Ntụgharị
Online metric akakabarede mgbako: n'ogologo, ebe, size, okpomọkụ, ọsọ, ndị ọgbọ, na ike.
Tangential osooso usoro ihe mgbako
Gbakọọ tangential osooso nke a na-akpụ akpụ ihe site mgbanwe nke ike ọsọ karịrị oge.
Gbakọọ olu na ịta (molarity) nke ihe ngwọta tupu mgbe dilution.